အထူးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း (၁၇)ကြိမ်မြောက် ဒိုဟာဖိုရမ် တက်ရောက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ နေပြည်တော်၊ မေ ၁၇
ကာတာနိုင်ငံ ဒိုဟာမြို့တွင် မေ ၁၄ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိ ကျင်းပသည့် (၁၇)ကြိမ်မြောက် ဒိုဟာဖိုရမ်သို့ တက်ရောက်ခဲ့သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့်အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် လေကြောင်းခရီးဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိကြသည်။
ခရီးစဉ်အတွင်း အထူးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ကာတာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani နှင့် မေ ၁၃ ရက် ညနေ ၄ နာရီတွင် ဒိုဟာမြို့ Sheraton Hotel ၌ လည်းကောင်း၊ ကာတာနိုင်ငံ ဥပဒေရေးရာနှင့် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Nasser Serayea Al Kaabi နှင့် မေ ၁၅ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် Advisory Council ရုံးအဆောက်အအုံ၌ လည်းကောင်း တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေး ကြသည်။
ကာတာနိုင်ငံတွင် ဥပဒေမူကြမ်းကို Council of Minister က ရေးဆွဲကြောင်း၊ လွှတ်တော်သို့ ဥပဒေကြမ်းရောက်ရှိချိန်တွင် ဥပဒေရေးရာနှင့် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီက လေ့လာသုံးသပ်ကြောင်း၊ ထို့နောက် Advisory Council က အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းကြောင်း၊ ကာတာနိုင်ငံ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၏ ရှင်းလင်းပြောကြားမှုအပေါ် အထူးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အလှကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ (မူကြမ်း) ရေးဆွဲရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၄